ब्राह्मण युवतीसँग प्रेम गर्दा लाठीको वर्षा | Sawal Nepal |The Power of Information
Posted By: सवाल नेपालon: २०७६ आश्विन ११, शनिबार १२:३४ मा प्रकासित Tags: No Comments
शारदा घर फर्किँदा साँझ परिसकेको थियो । छोरीलाई देखेर चन्द्रप्रसादको कन्सिरी तात्यो । ‘आज पनि डाङ्रोलाई भेटेर आइस् हैन । नभेटेसम्म खाको पच्दैन कि कसो ? कामीसित मुख जोडेको समाचार गामभरि छ । सम्झाउनु सम्झायौँ तर टेरपुच्छर लाइन । अब अति भो । जुन त बाटो आइथिस् त्यै बाटो जा ।’ बुढो गर्जियो ।
‘पत्रिकामा लेखेको झुटो हो । रमनेले फैलाको हल्लाको पछि नलाग्नुस् बुबा !’
‘केको बुबा ! को बुबा ? म¥यो तेरो बुबा !’
‘रमनले मात्र भन्या हो र ? सबै कामीसित जानलाई भन्चन् । जाने भए गैहाल्, म तेरो मुख पनि हेर्न चाहन्नँ ।’
‘भेटेको त हो रैच नि । थुक्क कुकुर्नी ! गाउँभरि बुइँबुइँ छ । छोरी सुध्रेली भनेको तर…. । जा घरबाट निस्किहाल् ।’ रमा पनि कुर्लिई ।
‘बोरामा कुइएको आलु प¥यो भने सबै आलु कुहाउँच । सासू मरी भन्नुभन्दा काल पल्केला भन्नी डरभो । छोरीलाई मोहनेको जिम्मा लाएर आउ चन्द्रप्रसाद !’ उसले भन्यो ।
‘ठुलाबडासँग मुखमुखै लाग्ने ! कुलङ्गार काँकी । ह्याँबाट निस्किहाल् ?’ चन्द्रप्रसाद फेरि कड्कियो ।
‘म किन जाने ? के अपराध गरेकी छु र जाने ?’ शारदाले अड्डी लिइ ।
‘यस्ता सन्तान जन्मनुभन्दा कोख बाँझो रहेको राम्रो ! धिक्कार छ तँलाई !’ रमा शारदाको जगल्टा लुछ्न अघि बढी ।
‘मोहनेसित नलाग् भनेर कति सम्झायौँ । हाम्रो लागि तँ मरिस् ! हट्, भाग् !’ चन्द्रप्रसादले शारदालाई घोक्¥यायो । ऊ घरको भित्तामा ठोकिई । टाउको र अनुहारमा चोट लाग्यो ।
‘आजदेखि तँ मेरी छोरी हैनस् । कमिनी होस, कमिनी !’ उसले भनी ।
‘यिनको पक्षमा बोल्दिने कोइ छैन भन्दैमा अत्याचार गर्न त भएन नि ! छोरी हो हजुरहरूकी । पाप लाग्च ।’ रञ्जनालाई दया लाग्यो ।
‘जान्ने हुन्चेस्, ला…!’
‘रगत छाद्ने गरी हान् !’ अर्कोले भन्योे ।
भोलिपल्ट बिहान दोषीउपर कडा कारबाहीको माग गदै बाबु शिवराम स्थानीय नेताको घर पुग्योे । नेताजीलाई बोल्न गाह्रो प-यो । लामो मौनतापछि उसले मुख खोल्योे–
‘मैले सबै कुरा बुझेँ । गाउँमा तल्ला जातको दुई अढाई सय भोट हो तर गैर दलितको भोट हजार हाराहारी छ । चुनाव आउँदैछ । थोरै तलवितल भो भने भोट ब्याङ्क बिग्रन्छ । हाम्रो पक्षमा पर्दै आएको भोट विरोधी पार्टीको बाकसमा जान सक्छ । अरू क्यै भए भन्नुस् तर यो विषयमा सरी !’ जवाफ आयो ।
‘उसोभा आउँदो चुनावमा हाम्रो भोट चाइँदैन हैन ? दुई हात जोर्दै भोट माग्न नआउनु नि फेरि ।’ यति भन्दै शिवराम नेताको घरबाट निस्कियो ।
‘अहिले तपाईंंलाई कस्तो छ ?’ मलीन अनुहारको साथ शारदाले सोधी ।
‘गहिरो चोटका बाबजुद तपार्ईंंँको ओठमा मुस्कान !’ आश्चर्य मिश्रित वाक्यमा शारदाले सोधी ।
‘म रुनु तिमीलाई रुवाउनु हो । त्यसैले रुन्न । बरू हाँस्छु, खित्का छोडेर हाँस्छु । सक्छ्यौ भने तिमी पनि हाँस !’
‘ठीक भन्नुभो । हाँसीहाँसी बाँच्नु । हाँसीहाँसी जङ्गार तर्नु । हाँसीहाँसी मर्नु ! रुनेको नजिक को जान्छ ? हाँस्नेले जगत हँसाउँछ ! हाँसो पोख्ने ओँठभित्र सिङ्गो ब्रह्माण्ड अटाउँछ ! तर सधैँ त्यसो गर्न सकिन्न र पो ।’ शारदाले भनी ।
मोहनले उद्घोष गर्न लाग्योे–
‘प्रिय भाइ तुलाराम ! यतिखेर हामी जीवनको महत्त्वपूर्ण मोडमा खडा छौँ । अबको केही बेरमा तिमी हाम्रो जीवनमा घट्न लागेको सुखद् परिघटनाको साक्षी बन्नेछौ । क्यामरा उठाई तयार होऊ ।’
‘आँसु नझार शारदा ! आज हाँस्ने दिन हो । जबसम्म माछापुच्छ्रे्र र फेवाताल यस धर्तीमा रहनेछन्, तबसम्म हाम्रो प्रेम जीवित रहने छ ! ब्राह्मण परिवारमा जन्मेर पनि तिमीले दलितसित जुनिभरको नाता जोड्यौ । तिम्रो प्रशंसामा जति शब्द खर्च गरे पनि कम हुन्छ !’ उसले भन्यो ।
‘ओ चराचर जगतको रचयिता ! ओ मौन प्रकृति ! तँ घायल प्रेमीको आवाज सुन् ! जबसम्म आकाशमा चन्द्र–सूर्य र तारा–नक्षेत्रहरू झिलमिलाउने छन् । जबसम्म यस धर्तीमा पहाड, खोलानाला, झरना, छहरा गीत सुसेल्दै बग्नेछन् । जबसम्म फेवा, रारा, गण्डकी, कोसी, कर्णाली, गंगा, यमुनाले असीम प्रेमका साथ सागरतर्फको यात्रा जारी राख्नेछन्, तबसम्म प्रेमीहरूको दुनियाँमा हाम्रो नाम अमर रहने छ । अबका प्रेमीहरूले रोमियो जुलियट हैन, लैला मजनु हैन, मुनामदन पनि हैन, शारदा र मोहनको नाम लिने छन् ।’
‘मेरी शारदा !’ मोहनले भन्यो ।
‘मेरो मोहन !’ शारदाले भनी ।
‘तेरो अभिशेषले तन–मनको जलन शान्त भयो । धन्यवाद छ तँलाई !’ आकाशतिर हेर्दै मोहनले भन्यो ।
(उपन्यासकार प्रकाश तिवारीको उपन्यास ‘निहारिका’को एक अंश, पुस्तक केही समयभित्रै बिमोचनको तयारी गरिएको छ ।)
ट्याक्टरको ठक्करबाट रतुवामाइका बिमलको मृत्यु